कसरी लोगो बनाउने | क्रिएटिव अनलाइन
कसरी लोगो बनाउन
के तपाइँ तपाइँको अनलाइन स्टोरको लागि लोगो कसरी बनाउने भनेर जान्न चाहानुहुन्छ? हुनसक्छ तपाईंको ब्लगको लागि हो? के तपाईंलाई यस्तो परियोजनाको लागि सोधिएको छ जसमा तपाईंले लोगो प्रस्तुत गर्नुपर्दछ र तपाईंले यो पहिले कहिले पनि गर्नुभएको थिएन? तपाईं लाग्न सक्नुहुनेछ कि लोगो बनाउनु संसारमा सब भन्दा सजिलो चीज हो, र त्यो मात्र minutes मिनेटमा तपाईं यो पाउन सक्नुहुनेछ। तर वास्तविकतामा त्यहाँ "सानो तस्वीर" पछाडि एउटा ठूलो विज्ञान छ र विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, गुणस्तरको लोगो प्रस्तुत गर्दै त्यसले प्रभाव पार्छ र तपाइँ सम्झनुहुन्छ कि यो प्राप्त गर्न सजिलो छैन।
तसर्थ, हामी यहाँ तपाईंलाई मात्र पढाउने छैनौं कसरी लोगो बनाउन, तर हामी तपाईले सबै कुराको बारेमा कुरा गर्न जानेछौं जब तपाईले यसलाई बनाउँदा तपाईले ध्यानमा राख्नु पर्छ ताकि तपाईको डिजाइन सबै भन्दा राम्रो हो।
1 लोगो के हो?
2 किन लोगो यस्तो महत्त्वपूर्ण छ
3 लोगोमा के हुनुपर्दछ
4 कसरी लोगो बनाउन
4.1 कार्यक्रमको साथ
4.2 कसरी लोगो अनलाइन बनाउने
4.3 के ती अनुप्रयोगहरूसँग गर्न सकिन्छ?
लोगो के हो?
शब्द लोगो आज हाम्रो शब्दावलीको एक हिस्सा हो, विशेष गरी यदि तपाईं वेब डिजाइनमा काम गर्नुहुन्छ, वा मार्केटिंग, विज्ञापन सम्बन्धित केहि काममा संलग्न हुनुहुन्छ भने ...
आरएई (रोयल स्पेनिश एकेडेमी) का अनुसार, लोगो, लोगो पनि भनिन्छ, यो कम्पनी, स्मारक, ब्रान्ड वा उत्पादनको विशिष्ट ग्राफिक प्रतीक हो। साथ साथै अक्षरहरूको एक समूह, संक्षेप, आंकडा, आदि। एकल ब्लकमा फ्यूज गरिएको टाइपसेटिंग को सुविधा को लागी।
अर्को शब्दहरुमा, हामीaको कुरा गर्दैछौं एक ब्रान्ड, कम्पनी, उत्पादन, आदि को प्रतिनिधित्व छवि। यसले वस्तु वा कम्पनीले के गर्छ वा नाम के साथ पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, जब हामी कोका कोला, नेस्क्विक, नुटेला, म्याकडोनाल्डका बारे सोच्दछौं ... तिनीहरू ब्राण्ड र कम्पनीहरू हुन्, र लोगोहरू हाम्रो दिमागमा आउँछन्, जुन उनीहरूलाई हामीले पहिचान गर्छौं।
यो प्राप्त गर्नका लागि कम्पनी र विचार जुन तपाईं लोगो मार्फत सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ राम्रोसँग मूल्याated्कन गर्नुपर्दछ। तिनीहरू संक्षिप्त रूप, एक प्रतिनिधि वस्तु, पूरा नाम हुन सक्छ ... केको साथ खोजी गरिएको छ यो विश्वास सिर्जना गर्नु हो र उही समयमा मान्यता, त्यो हो कि व्यक्तिले जुन लोगो देख्छ त्यो यसलाई कम्पनी, उत्पादन वा यो ब्राण्डसँग छ जुन एक तरीकाले प्रतिस्पर्धाबाट फरक छ।
लोगोका बिभिन्न प्रकार छन्, जुन लोगोबाट सबैभन्दा राम्ररी परिचित छन् (जहाँ तिनीहरू मूलत: अक्षरहरू प्रयोग गर्दछन्), इमेजोटाइप (छवि वा अक्षरको मिश्रणको साथ), आइसोटाइप (छविहरूको साथ प्रतिनिधित्व) वा ईसोलोगो (छविहरू र पाठ मिश्रित) सँगै))।
किन लोगो यस्तो महत्त्वपूर्ण छ
यदि तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि किन तपाईंले सानो, लोगोमा समय, प्रयास र स्रोतहरू समर्पित गर्नुहुन्न भने हामी तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्छौं:
यदि तपाईं चिठीको लोगो देख्नुभयो भने, यदि तपाईं विवरणमा ध्यान नदिई पेन्टको साथ त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं हामीलाई के भन्नुहुनेछ? धेरै जसो सम्भवतः तपाईले विचार गर्नुहुनेछ कि कम्पनी गम्भीर छैन र यसले विवरणमा ध्यान दिएन। के तपाईं तिनीहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? उदाहरण को लागी, एक वकिल, जो आफ्नो नाम को प्रारम्भिक संग खराब बनाएको लोगो छ। यो सानो बच्चाले गरेको जस्तो देखिन्छ, तपाईं अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न उहाँको सेवाहरू भाडामा लिनुहुन्छ? सम्भवतः छैन, किनभने यदि तपाईं यो लोगोको साथ गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कसरी आफ्नो कामको साथ "बाँकि" हुनुहुनेछ?
ठीक छ, लोगोको महत्त्वको साथ पनि त्यस्तै हुन्छ। यी सेवा गर्न केहि राम्रो गरीएको भावना प्रदान गर्नुहोस्, कि तपाई विस्तारमा ध्यान दिनुहोस् र तपाइँ यसलाई कम्पनी, ब्रान्ड वा उत्पादनको सार दिन प्रयास गर्नुहुन्छ।
लोगोमा के हुनुपर्दछ
अब जब तपाइँ लोगोका बारे अझ बढी जान्नुहुन्छ र तपाईंलाई तिनीहरूको महत्त्व पनि थाँहा हुन्छ, हामी तपाईंलाई लोगो कसरी बनाउने भनेर सिकाउँनु अघि, तपाईंले तिनीहरूको कुन विशेषताहरू पूरा गर्नुपर्दछ ध्यानमा राख्नुपर्दछ। विशिष्ट:
सरल हुनुहोस्। तपाईंलाई सजिलैसँग कुनै कुराको खाँचो पर्दैन, सरल मात्र ताकि यसलाई सजिलै याद रहन सक। यस अर्थमा, विशेषज्ञहरूले3भन्दा धेरै र colors्गहरू प्रयोग नगर्न सल्लाह दिन्छन्, राम्रो टाइपफेस छनौट गरेर र छाया वा ढाँचा हटाउने।
त्यो तपाइँको देखाउन चाहानुहुन्छ। त्यो हो कि व्यक्तिहरूले यसलाई अवलोकन गर्छन् र कम्पनीसँग र यो बेच्दछन्। वा यदि यो उत्पादन हो भने यसका उद्देश्यका साथ।
समय रहित जबकि लोगोहरू समयसँगै परिवर्तन गर्न सक्दछन्, तपाईंलाई यस्तो आवश्यक हुन्छ जुन हरेक पटक परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दैन "ट्रेंडमा"।
र हामी सबैभन्दा व्यावहारिक भागमा आएका छौं, कसरी लोगो बनाउने। आज तपाईंसँग यो गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। तर तपाइँ सुरू गर्नु अघि, यो सुविधाजनक छ कि तपाइँ कम्पनी, उत्पादन वा ब्रान्डको गहिराइमा चिन्नुहुन्छ, कि तपाइँ यो जान्नुहुन्छ कि यो लोगोसँग के प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ र केमा यसले प्राप्त गर्न चाहन्छ। त्यस तरीकाले तपाईं पहिलो स्केचहरू सहि पाउन सक्नुहुन्छ र, यसैले यसमा अत्यन्त कडा परिश्रम गर्नुपर्दैन।
को बारे मा पक्षहरू लोगो शैली, र ,्ग, डिजाइन, लक्षित श्रोता, आदि। काममा जानुभन्दा पहिले धेरै महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू हुन्। यदि तपाईंसँग पहिले नै छ भने, ग्राफिकमा अगाडि बढौं।
छवि सम्पादन प्रोग्रामहरू यो काम गर्नका लागि उत्तम हुने छन्। र तपाईले दुबै भुक्तानी गर्नुभयो र सित्तैंमा पाउनुभयो। त्यहाँ कुनै श .्का छैन फोटोशप एक राम्रो कार्यक्रम हो, तर त्यहाँ वास्तवमा अन्य धेरै छन् जुन तपाईंलाई लोगो बनाउन मद्दत गर्दछ।
अवश्य पनि, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले छान्नु भएको कार्यक्रमले तपाईलाई तहहरूको साथ अपरेट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। किन? ठिक छ, किनभने यसले तपाईका लागि चीजहरू सजिलो बनाउँदछ, त्यसकारण, प्रत्येक लेयरले लोगोको एक भाग (पृष्ठभूमि, रेखाचित्र, पाठ, इत्यादि) लाई व्यवहार गर्दछ र, यसैले यदि केहि परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने, तपाई सुरुबाट यसलाई फेरि गर्नुपर्दैन, तर केवल यसको एक अंश परिमार्जन गर्नुहोस्।
सामान्यतया प्रक्रिया निम्नानुसार छ:
अनुरोध गरिएको लोगो मापनको साथ खाली (वा पारदर्शी) छवि सिर्जना गर्नुहोस्।
प्रोग्राममा प्रयोग गर्न छवि खोल्नुहोस् (यदि एक प्रयोग गरिएको छ भने)।
पाठ लेख्नुहोस् र टाइपोग्राफी कम्पनीको सारमा आधारित परिवर्तन गर्नुहोस् र तपाइँ ग्राहकलाई कुन प्रस्ताव दिन चाहानुहुन्छ। याद गर्नुहोस् कि यो राम्रो छैन कि तिनीहरूसँग छाया वा ग्रेडियन्टहरू छन्।
कसरी लोगो अनलाइन बनाउने
लोगो बनाउनको लागि अर्को सम्भाव्यता भनेको इन्टरनेटको प्रयोग गर्नु हो। र विशेष गरी अनलाइन पृष्ठहरू जुन सम्पादकले तपाईंलाई लगत सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ तिनीहरूको टेम्पलेटहरूको साथ।
केही भुक्तान गरिएको छ, तिनीहरूलाई प्रयोगको लागि होइन, तर लोगो डाउनलोड गर्न। अन्य नि: शुल्क छन् र यस मामलामा तपाईंसँग ती धेरै मौलिक छन् र अन्य जुन तपाईंलाई मध्यम गुणस्तरका डिजाइनहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
तर यदि तपाईले खोजिरहनु भएको पेशेवर लोगो हो जुन राम्रो देखिन्छ भने, कार्यक्रमहरूको साथ गर्नु उत्तम हो।
के ती अनुप्रयोगहरूसँग गर्न सकिन्छ?
स्मार्टफोनको उदयले हामीलाई सबै चीजको लागि मोबाइलको बढि प्रयोग गर्यो। फोटोहरू सम्पादन गर्न समावेश गरिएको छ वा, यस अवस्थामा यसैले लोगो कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि। किनभने हो, यो गर्न सकिन्छ।
अनुप्रयोगहरू मनपर्दछ Zyro लोगो निर्माता, लोगो निर्माता वा लगस्टर ती मध्ये केहि हुन् जुन तपाई नि: शुल्क पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई एक बढि पेशेवरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ शुल्क पनि छ।
यससँग समस्या यो छ कि तिनीहरू छविहरूको प्रकारहरूमा "सीमित" छन्, फन्टहरूको प्रकार, र यस्तै। (त्यसैले हामी कार्यक्रमहरू सिफारिस गर्दछौं)।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी लोगो बनाउन
कसरी Photoshop संग किनारहरु चिकना गर्न